विमानस्थलमा आँशु बगाउँदै युवायुवतीको यस्तो भिड, सरकारले देख्दैन ? | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
विमानस्थलमा आँशु बगाउँदै युवायुवतीको यस्तो भिड, सरकारले देख्दैन ?
प्रकाशित मिति : 19 March, 2019
चैत ५, काठमाण्डौ । नेपालको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवनअन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक हजारौं मानिसहरुको भिडभाड देखिन्छ । त्यो भिडभाड विदेशबाट आएका आफ्ना आफन्तहरु लिन गएकाहरु भन्दा रोजगारकिो लागि विभिन्न मुलुक जानेहरुको भिडले भरिने गरेको छ ।
गत फागुन २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना १ बर्षे कार्यकालको प्रगती विवरणमा वैदेशीक रोजगारमिा जानेहरुको संख्य घटेको तथ्याङ सार्वजानिक गरेका थिए । तर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल जाने हो भने प्रधानमनत्रीको उक्त तथ्याङलाई गिज्याइरहेका देखिन्छ ।
अहिले पनि हजारौ युवा,यूवतीहरु रोजगारीकै लागि विभिन्न खाडी मुलुक जानेहरुको संख्यमा १ नम्बरमै छ । सोमबार हामी यसै विषयमा रिपोटिङ गर्न त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थियौ ।
हामी पुग्दा त्यांहाको दृश्य सांच्चिकै दुखलाग्दो थियो । सयौ युवाहरु मुलुकको अवस्था देखेर वाक्क दिक्क भएर रोजगारीकै लागि विभिन्न खाडीमुलुक जानेहरुको भिड देखिन्थ्यो । हामीले पनि उनीहरुको वास्तविकता बारे केही व्यत्तिहरुसंग जान्ने प्रयास ग¥यौं, हामी पनि उनीहरुको जवाफले सांच्चै दुखित भयौं । उनीहरु भन्दै थियो मुलुकको राजनितिक अस्थिरताले बांच्नकै लागि सानो तिनो रोजगारी समेत नपाएपछि कसरी बस्न सकिन्छ र भन्ने गुनासो विदेश उँड्दै गरेका युवायुवतीहरुको छ ।
युवाहरु मात्र होइन रोजगारीकै लागि बिदेशीने युवातीहरुको संख्या पनि बाग्लै छ । मुलुकको राजनितिक अस्थिरताले जो कोहीलाई मुलुकप्रति माया हुदां हुदै बाध्य भएर विदेशीनु परीरहेका छन ।
हो,सांच्चै शब्दमा उर्तान नसक्ने पिडाहरु लिएर देनिक हजारौ युवाहरु विदेशीन बाध्य छन । सरकारले भने जस्तो र सार्वजानिक गरेको तथ्याङ जस्तो वास्तविकता छैन जनताको जिवनशैली । यस्तै हो भने वर्तमान सरकारले लिएको सम्बृद्ध नेपाल,सुखी नेपालीको नारा पुरा होला र ? प्रश्न गम्भिर छ ।
प्रधानमन्त्रीबाहेक सेट नै परिवर्तन गरी मन्त्रीमण्डल गठनको तयारी
काठमाडौं, ४ मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र
काठमाडौं, ४ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठन गर्न लागेको जानकारी गराउँदै मन्त्रीहरुलाई
आज मन्त्रिपरिषद् हेरफेर
काठमाडौँ, ४ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री
मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई गगन थापाको यस्तो सुझाव
काठमाण्डौं, ३ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा पूर्वमन्त्री गगनकुमार थापाले
भोलि मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गर्छु : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, ३ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गर्ने भएका छन् ।
ओली सरकारको २१ महिना : के भयो के भएन ?
काठमाण्डौ । सदैव अस्थिर र कमजोर सरकार चल्दै आएकोमा पछिल्लो संसदीय निर्वाचनबाट मुलुकले झण्डै दुई
२१ महिनामा २१ असफलता
काठमाडौं, ३ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि आरोपमाथि
‘सरकार धाँधली गरेर भएपनि उपनिर्वाचन जित्ने कोशिसमा छ’ काठमाडौं, ३ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल